2 Desambra: mahazoa bonus 50% hatramin'ny PLN 400 ao amin'ny Casino -
Fametrahana min. PLN 40 ary mahazoa bonus 50% hatramin'ny PLN 400 ao amin'ny Casino, manan-kery anio ihany ny tolotra manomboka amin'ny 00:01 ka hatramin'ny 23:59. Mba hahazoana bonus deposit 50% hatramin'ny PLN 400, ny mpilalao dia tokony hametraka farafaharatsiny PLN 40.
Ahoana ny fomba ahazoana bonus 50%?
1. Sokafy ny kaonty miaraka amin'i Betsson
2. Mametraka min. 40 PLN
3. Bonus 50% hatramin'ny PLN 400 no miandry anao
Ny bonus dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny Casino / Live Casino farafaharatsiny 35 ao anatin'ny 3 andro.